प्रिमियर इन्स्योरेन्सको बीमा कोष २१% ले बढ्दा कुल बीमा शुल्क आर्जन कति ? – Insurance Khabar
(Oct 24, 2021)
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको बीमा कोष २१% ले बढ्दा कुल बीमा शुल्क आर्जन कति ?
प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार १०:१०
काठमाडौं । प्रिमियर इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७५/७६को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा २४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको नाफा ४६ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको बिमा कोषमा ४८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले बीमा कोषमा ४० करोड ९ लाख रुपैयाँ रकम रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षकधो सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको बीमा कोषमा २१ प्रतिशतले बढाएको हो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्ममाआइपुग्दा कम्पनीकोे जगेडा कोषमा भने सञ्चिती गिरावट देखिएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६५ करोड ४ लाख रुपैयाँ सञ्चिती गरेको थियो भने यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १५ करोड ७३ लाख रुपैयाा मात्र सञ्चिती गरेको छ ।
त्यसैगरी कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन पनि १ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले ८० करोड ८० लाख रुपैयाँमा बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधमा कम्पनीले ८१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को १२ महिनाको अवधिसम्म आइपुग्दा कम्पनीले ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ । कुल दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रकम भने १ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ ८७ पैसा रहेको छ ।
सन नेपाल लाइफद्धारा १ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मृत्यु दाबी भुक्तानी
नयाँ ब्राण्डिंगसँगै आक्रामक बजारीकरण गर्दै सूर्या लाइफ
वीरगंजमा महिला उद्यमी सम्मेलन
एशियन लाईफ स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनको चौथो अधिवेशन सम्पन्न
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले आगन्तुक रिसोर्टमा विषेश छुट पाउने
चर्को ब्याजदर असुल्न एनआइसी एशिया बैंकका ऋणीलाई नयाँ कर्जा सम्झौता
तपाईलाई साहस उर्जाको आइपीओ पर्यो ? कतिमा होला पहिलो कारोवार ?
नेपाल लाइफका अभिकर्ताले तिहार तथा छठको उपलक्ष्यमा चाँदीको सिक्का सहित नगद इन्सेन्टिभ पाउने
न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओ पर्यो कि परेन ? नतिजा यी चार वटा साइटबाट हेर्न सकिने
हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि दुई कम्पनीले दिए बोर्डमा निवेदन
बजार घट्दा लगानीकर्ताको सर्वाधिक रोजाइमा परेका १० कम्पनी
न्यादी हाइड्रोपावरको आइपीओ बाँडफाँड सम्पन्न, २ लाख ९ हजार २५० जनाले पाए १० कित्ता
ग्लोबल आइएमई बैंकको हाइब्रिड बचत खाता सञ्चालनमा, यस्ता छन् विषेशता